Multifunctional Power Mita Factory - China Multifunctional Power Mita Manufacturers, Suppliers
KF900A Portable Intelligent ...
K2063i Universal Relay Test ...
Atọ-adọ Network Multifunctional Power Mita IP52 / 0.05Hz PMC180NS
Single / Atọ adọ AC System
Nnyocha Ogo Ike
PMC96 usoro nke ato elekere elekere elektrik
PMC96 usoro atọ-adọ electric nlekota mita adopts nke Akụkụ ụdị LCD ihuenyo 、 mara mma na akwa ， nnukwu iche; Na nhazi ọsọ ọsọ dị ka isi, mmụba nke eletrikiiki na-eji 22 AD, ike ọkụ eletriki, mbara igwe dị omimi, oke ziri ezi. Nwere ike nhọrọ hazi iche iche ọnụọgụ abụọ-ọsọ agba anọ 、 RS-485 nkwurịta okwu modul, nwere ike mfe mezuo mwekota nke dị iche iche nwere ọgụgụ isi nkesa usoro.
PMC72 Series Atọ-adọ Electric Monitor Meter
PMC72 usoro atọ-adọ electric nlekota mita adopts nke Akụkụ ụdị LCD ihuenyo 、 mara mma na akwa ， nnukwu iche; Na nhazi ọsọ ọsọ dị ka isi, mmụba nke eletrikiiki na-eji 22 AD, ike ọkụ eletriki, mbara igwe dị omimi, oke ziri ezi. Nwere ike nhọrọ hazi iche iche ọnụọgụ abụọ-ọsọ agba anọ 、 RS-485 nkwurịta okwu modul, nwere ike mfe mezuo mwekota nke dị iche iche nwere ọgụgụ isi nkesa usoro.
EngyBrick Ekesa Module Nlekota ikike ọgụgụ isi
EngyBrick System bụ ihe gbasara ike modul nkesa modulu, nke raara onwe ya nye iji nyere ndị ahịa aka imeziwanye arụmọrụ ha ma belata oke ego ha na-azụ na mmefu ego, na-enye ndị ọrụ ọnọdụ nrụnye kachasị mma na ọnọdụ kachasị mma na-azọpụta oge. Usoro a nwere nkwukọrịta ihe mgbaàmà nnweta & nlekota volta, nyocha ugbu a n'akụkụ abụọ. Usoro a jiri usoro nnweta ike ụgbọ ala nọọrọ onwe ha, ọdụ ụgbọ mmiri RJ45 jikọtara ya na modulu ọ bụla. Ọrụ ya na-anabata ọnọdụ otu ụzọ maka nhazi adreesị n'ọhịa. ọ nwekwara ike ịhazi oke na modulu na-arụ ọrụ site na ihuenyo ngosi.
PMC200 Power oke nyocha na-ọtụtụ-eji maka ike management usoro, substation akpaaka, nkesa na netwọk akpaaka, subdistrict ike nkesa, ulo oru akpaaka, nwere ọgụgụ isi ụlọ, ọgụgụ isi switchboard, ịgbanwee kabinet, wdg Ọ integrates digitization, ọgụgụ isi na ịkparịta ụka n'togetherntanet ọnụ, dochie anya omenala equipments dị ka electric ibu transducer, ọnụọgụ ngosi ngwá, data nnweta unit na-edekọ ihe analyzer, wdg The multi-nzube lows na-eri, na mfe waya njikọ simplifies ule.
Anya Nchekwa ọsọ agba anọ Tester, Esi esi agba anọ Tester, Ọgụgụ ọsọ agba anọ Tester, Relay Test, Nchekwa ọsọ agba anọ Tester, Nyocha nke Digital, Ngwa niile